December 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အတွင်းခံများကပြောတဲ့ ကျန်းမာရေး ကျနောတို့လို နိုင်ငံအနေနဲ့ အတွင်းခံအကြောင်းပြောရတာ နည်းနည်းထူးဆန်းနေသလိုလို ရှက်စရာလိုလို ဖြစ်နေပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ကြည့်မည်ဆိုပါက ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေသင့်သော ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်သည် ။ ဒါကြောင့် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား (၁) ချည်သားကိုသုံးပါ အတွင်းခံရဲ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ပိုးတွေ ပိုလီအီစတာအသားတွေဖြစ်နေပါစေ အလည်ပိုင်းကို ချည်ဖြင့်သာရှိသော…
မတူညီသော သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်းများ (IUD) သန္ဓေတားနည်းလမ်းများထဲကလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သားအိမ်တွင်းထည့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး တီပုံစံလေးကို IUD လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အဖျားမှာ ကြိုးလေးရှိပြီး မိန်းမကိုယ်ထဲကနေ ပစ္စည်းရှိနေ မနေ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ် ။ အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တားဆေးကတ်သုံးကြပေမယ့်…
မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျဉ်းအောင်လိမ်းတဲ့ cream တွေအကြောင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ Vaginal tract (မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း) ကျဉ်းအောင်လိမ်းတဲ့ cream တွေအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ် ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေမှာ သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျယ်လာရသလဲ? 1)ကလေးအများကြီးမွေးတဲ့အမျိုးသမီးများ 2)သွေးဆုံးပြီးသော အမျိုးသမီးများ 3)ခဏခဏ…
အရေးပေါ်တားဆေးနှင့် အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများ မေး ၁။ အရေးပေါ်တားဆေးကို ဘယ်အချိန်သောက်ရလဲ? ဖြေ – အတူနေပြီး နာရီ ၁၂၀အတွင်း သောက်ရပါတယ်။ စောစောသောက်လေ အာနိသင်ပိုရှိလေပါ။နောက်ကျမှသောက်လေ အာနိသင်လျော့နည်းလေပါ။ (* အတူနေပြီး ၂၄နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း 95%ရှိပြီး၊ အတူနေပြီး ၇၂နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင်တော့…
" လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း ပြန်ထုတ်တဲ့အခါ "
” လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း ပြန်ထုတ်တဲ့အခါ “ လက်မောင်းထဲကို သန္ဓေတားပစ္စည်း ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကို အတော်များများသိပြီးကြပြီထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုတစ်ခါမှာတော့ – လက်မောင်းထဲထည့်ထားတဲ့ သန္ဓေတားပစ္စည်းကို ဘယ်တော့ ပြန်ထုတ်မလဲ? – ဘယ်လိုမျိုးပြန်ထုတ်မလဲ? ဆိုတာလေးပြောပြပေးပါမယ်နော် ဘယ်တော့ပြန်ထုတ်မလဲဆိုရင် – သန္ဓေတားပစ္စည်းရဲ့ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်သွားလို့ ပြန်လဲရမယ့်အခါ…
ဂျိုင်းကြားအသားအရေ ညိုမည်းခြင်းကို ဘယ်လိုကုသမလဲ အလှအပကိုအလေးထားတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ ပြစ်မျိုးမှ့ဲ မထင်အောင် လှပဖို့ ကုသမှုတွေ ခံယူလို့ရနေပါပြီနော် အဲ့ဒီအထဲမှာမှ ဂျိုင်းကြားအသားအရေ ညိုမည်းခြင်းကို ဘယ်လိုကုသမှုတွေနဲ့ ကုသလို့ရို့ရလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ် လူအယောက် ၁၀၀ မှာ ၅၀ လောက်က ဂျိုင်းကြား…
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းခြင်း အခုတစ်ခေါက်ဆောင်းပါးမှာတော့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့ အမျှ အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၃၀ ကျော်လာတာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုလေးတွေနဲ့ စတင်ကြုံလာရပါတယ် အဲ့ဒီ လက္ခဏာလေးတွေကတော့- 1)နှဖူးအရေးအကြောင်းများပေါ်လာခြင်း 2)မျက်မှောင်ကျုံ့တဲ့…